Wednesday, 01 December 2010 11:54	नागरिक
अहिले प्रदर्शन भइरहेको फिल्म 'बाटोमुनिको फूल'का अभिनेता तथा निर्माता हुन् यशकुमार। 'मैले छोएको पानी चल्दैन' गीतबाट चिनिएका गायक यशकुमारले नागरिकसँग फिल्मबारे गरेको भलाकुसारीः
दलित मुद्धामाथि किन फिल्म बनाउनुभएको?
यस विषयमा कानुन बन्यो। मान्छेले विभेद गर्नु नकारात्मक काम हो भन्ने पनि थाहा पाए। तर, दलितमाथि हुने विभेदलाई निर्मुल पार्नेतिर कोही लागेनन्। हेपिइरहे। यस्तो अवस्थामा फिल्मले केही टेवा पुर्‍याउँछ कि भनेर बनाएको।
छुवाछुतकै बारेमा गीत गाएर स्थापित भए पनि हिरोको रूपमा जम्न सजिलो त छैन होला नि?
यो आ-आफ्नो दृष्टिकोण हो। हिरो बन्छु नै भनेर आएको पनि होइन। कसैलाई च्यालेन्ज पनि गर्दिनँ। नेपाली फिल्मको हिरोको जति क्रेज त पहिल्यै थियो जस्तो लाग्छ। तैपनि दर्शक प्रतिक्रियाले उत्साहित छु।
अरूलाई नै खेलाउने कुरा थियो कि?
सुरुमा अरू हिरोलाई नै खेलाउन खोजेका हौं। तर, फिल्ममा गायककै कथा भएकोले निर्देशक सुरज सुब्बाले मलाई नै खेल्न अनुरोध गर्नुभयो। मैले पनि मानेँ।
कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ फिल्मले?
फिल्म रिलिज भएको धेरै हल पुगेँ। फिल्मको शिक्षा र मेकिङलाई दर्शकले मन पराए। गैरदलितले पनि स्याबासी दिएका छन्।
दलितप्रतिको सामाजिक विभेदबारे तपाईंको निजी अनुभव के छ?
आफैंले भोग्नुमात्र अनुभव होइन। दलितलाई गाउँ निकाला गरेको, दिसा खुवाएको, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको जस्ता खबर पत्रपत्रिकामा दैनिक देखिन्छ।
यो फिल्म बनाउन कतिको रिसर्च गर्नुभयो?
यथार्थमा देखिएको चिजमाथि फिल्म बनाउन रिसर्चको आवश्यकता परेन। आफूले देखेको, सुनेको, पढेको सब सही हुन् भन्ने लागेर फिल्म बनायौं।
४८ लाख दलित छन्। १० लाख दलितले मात्रै फिल्म हेरिदिए पनि तपाईको फिल्मले फाइदा कमाउने थिएन र?
हामीले व्यावसायिक पाटोलाई महत्व दिएर फिल्म बनाएका होइनौं। मौलिक फिल्म बनाएकाले सबैलाई हेर्न अनुरोध गर्छौं। यो फिल्म दलितले भन्दा गैरदलितले हेर्न आवश्यक छ।
पुरानो गीत 'मैले छोएको पानी चल्दैन'लाई यसमा राख्नुको कारण?
यो गीत फिल्मको माग थियो। चलेकोले होइन फिल्ममा सान्दर्भिक भएकोले राखेका हौं।
छुवाछुत वा जातीय मुद्दामाथि बनेको फिल्म यसअघि तपाईले हेर्नुभएको थियो?
'रगत' भन्ने फिल्म बनेको थियो भन्ने सुनेको हुँ। हेरेको छैन। तुलसी घिमिरेको फिल्ममा पनि यस्तो विषयले स्थान पाएको थाहा छ।
फिल्मका डाइलग एनजिओका कार्यकर्ताले बोल्ने खालको छ भन्छन् नि?
खोइ, संवाद लेखेर खारिएका व्यक्तिले फिल्म निर्देशन गरेका हुन्। आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा त संसारका प्रख्यात फिल्ममा पनि निकै खोट देखाउन सकिन्छ। म 'बाटो मुनिको फूल' पनि खोटरहित छ भन्ने दाबी गर्दिनँ।
छुवाछुत र विभेदविरुद्ध फिल्मको भूमिका कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ? तपाईको फिल्म यो मामिलामा कति सफल छ?
विभेदविरुद्ध त फिल्म सशक्त छ नै। नेपाली फिल्म भनेपछि नाक खुम्च्याउनेलाई पनि यसको मेकिङ र प्रविधिले आकर्षित गरेको पाएका छौं।
फिल्ममा तपाईंको निरन्तरता रहने सम्भावना 'बाटो मुनिको फूल'ले देखाएको छ?
यो चाहिँ मैले भन्दा निर्देशकले चाहे हुने कुरा हो। नेपाली सुगन्ध आउने फिल्ममा खेल्न अफर आए खेल्छु।
फिल्म बनाएपछि चलाउन चाहिँ कति गाह्रो भयो?
निकै गह्रो भयो। सबैलाई आफ्नो फिल्म उत्कृष्ट हुँ भनेर देखाउन हतार भएकोले रिलिजमा गाह्रो भएको अनुभव गरेँ।
फिल्मको लगानीले एक करोड नाघ्यो रे? किन त्यति धेरै खर्च?
सुटिङमा मौसमले साथ नदिँदा बजेट बढ्यो। हामीले प्राविधिक रुपमा स्तरीय फिल्म बनाउने जमर्को गर्दा पनि बजेटले सीमा नाघेको हो। तर, दुःखी छैनौं। नेपालबाट मात्र भएन भने विदेशी बजारबाट लगानी कभर होला भन्ने आशा छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा फिल्म बनाउँदा दलितसँग काम गरिरहेका मान्छेहरूको सल्लाह तपाईले लिनुभयो कि भएन?
आवश्यक ठाउँमा सल्लाह लिएको हो। धेरैले सहयोगको वचन पनि दिएका छन्।
दलित त गरिबीको रेखामुनि छ, तर तपाईले खेल्नुभएको पात्र त निकै धनी देखाउनुभएको छ, किन?
दलित भनेपछि फाटेको लुगा लगाउने, छाप्रोमा बस्ने, फोहोरी र गरिबमात्र हुन्छन् भन्ने 'अपर क्लास'को रोगी सोचाइ हो यो। उच्च तहमा काम गर्ने धनी दलित पनि छन्। तर, त्यो कुरा बाहिर आउँदैन। त्यसैले फिल्ममा हामीले दलितको नदेखिएको पाटो देखायौं।
सुरूवात राम्रो छ यसजी। जारी राख्नु होला।
नयाँ फिल्मको लागि शुभकामना!
यशजी पटकथा कमजोर छ।
यसजी फिल्मभन्दा पनि अध्धयनको जरूरी छ। तपाइँप्रति मेरो अगाध माया छ तर त्यो फिल्मले होइन, संगितले दिएको छ। आज हिरो बन्नु होला, चल्नु पनि होला। तर आफ्नो परिचय सकेसम्म हराउन नदिनु होला। तपाइँको गीतसंगीत सुन्दा अर्कै आन्नद आउँछ, जुन तपाइँको परिचय हो। बाँकीको जिम्मा तपाइँलाई नै।